Arabia Saodita: Nanao Fihetsiketsehana Nandritra Ny Fetim-Pirenena Ny Fianakavian’ireo Gadra Tsy Amin’ny Antony · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita: Nanao Fihetsiketsehana Nandritra Ny Fetim-Pirenena Ny Fianakavian’ireo Gadra Tsy Amin’ny Antony	Voadika ny 01 Oktobra 2012 2:06 GMT
Zarao: Ny fanagadrana tsy amin’ny antony no lohahevitra mavaivay indrindra momba ny zon'olombelona any Arabia Saodita. Tombanan'ny Fikambanan’olo-tsotra Saodiana miaro ny zon’olombelona sy ny Fikambanana miaro ny Zo Ara-pollitika fa maherin’ny 30,000 no isan’ireo gadra tsy misy antony, raha toa kosa ny governemanta nanombana azy ireo ho 4.396. Maro ireo nosamborina nandritra ny fihetsiketsehana “ady amin’ny fampihorohoroana” taorian'ny 11 septambra.
Tamin’ny 23 Septambra 2012, andro fankalazana ny fetim-pirenena Saodiana, nanararaotra nanao fanentanana mikasika ny momba azy ireo ny fianakavian’ireo gadra tsy amin’ny antony, nanao sit-in teo ivelan’ny fonja al-Turfiya akaikin’i Buraidah izy ireo. Araka ny tatitra avy amin’ny Reuters, lehilahy 60, vehivavy 45 ary ankizy 16 no nandray anjara tamin’izany.
Tamin’ny voalohany, nohodidinin’ny polisy misahana ny rotaka ny mpanao fihetsiketsehana, ary tsy navela hitady sakafo sy rano. Mohammad al-Qahtani, mpiara-manorina ny Fikambanan’olo-tsotra Saodiana sy ny Zo Ara-politika nisioka hoe [ar]:
MFQahtani: Voahodidina polisy misahana ny rotaka ny sit-in ao al-Turfiya ary tsy avelan’izy ireo miditra sy mivoaka ny olona. Nangonin’izy ireo ihany koa ny laharana amin’ny fiaran’ny mpanao fihetsiketsehana ary tsy navela hitady rano izy ireo!
Nandrahona ny handoro ny tenany ny mpanao fihetsiketsehana iray, tahaka ny tany Bouazizi, raha toa ka mbola tsy avelan’ny polisy hitady sakafo sy rano ny olona [ar]:
@abosaud3331: Aoka ho fantatry ny governemanta sy ny Minisitry ny Atitany fa ho Bouazizi vaovao aho raha toa ka tsy avelan’izy ireo hisakafo sy hisotro rano ny olona. Vonona amin’izany aho. Aelezo.
Na dia izany aza, mpanao fihetsiketsehana iray nahavita nandrava ny sakana ary nitondra sakafo tao amin’ny sit-in [ar]:
@abo_otman: Nahatonga ny rano sy ny sakafo, tsy ara-dalàna, ny olona iray!
Al-Qahtani nitatitra fa nanatevin-daharana ny polisy misahana ny rotaka ireo mpikambana avy ao amin’ny Komity mampiroborobo ny hatsaram-panahy sy ny Fisorohana ny hadalàna, izay lazaina fa hoe “polisy mpivavaka”. Nandany ny alina teo anoloan'ny fonja fianakaviana ny alina manontolo, nitaky ny tsy maintsy hihaonany amin'ny mpitantana ny fonja.
Niezaka ny nampitahotra ireo mpanao fihetsiketsehana ny polisy misahana ny rotaka [ar]:
Misokatra [ho anao] ny varavaran’ny manam-pahefana. Aza mitady loza ho anao sy ny fianakavianao.
Rehefa nihoatra ny fotoana, niparitaka ny mpanao fihetsiketsehana, saingy rehefa tonga teo amin'ny toeram-pisavan'ny polisy iray izay iandrasan'ny mpanohana azy ireo hanomezana rano sy sakafo, dia nihodidin’ny polisy avy hatrany ary nodarohany. Anisan’ireo voadaroka i Reema al-Joresh, mpikatroka. Mbola narahan’ny polisy ihany koa ireo fiara niala tao an-toerana.
Lehilahy maherin’ny 50, nandray anjara tamin’ny sit-in, no mbola voatàna hatramin'izao.
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 11 ora izayBahrainAiditra Am-ponja Tsikelikely Ireo Mpanohitra Malaza Ao Bahrain
2 andro izayEoropa AndrefanaDia lavabe sy mampididoza nataon'ny Syriana iray hialokaloka any Eoropa
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, বাংলা, English
16 Febroary 2014Afrika Avaratra sy Afovoany AtsinananaTantaram-Pitiavana Tsy Misy Oroka? Izany No Sinema Any Iran